Kumthusile ukunikwa isikhundla kumaProteas uBavuma - Impempe
Kumthusile ukunikwa isikhundla kumaProteas uBavuma
Ukaputeni wokuqala onebala elimnyama emlandweni weqembu lesizwe laseNingizimu Afrika, amaProteas emidlalweni yama-One Day International (ODI) neyeT20, uTemba Bavuma uyavuma ukuthi lokhu kuqokwa kwakhe kumshaqisile.
UBavuma, onemonyaka engu-30 umenyezelwe yiCricket South Africa (CSA) njengokaputeni omusha wamaProteas kuma-ODI nakwiT20 ngoLwesine.
Uyena ozobe ehola amaProteas kwiNdebe yoMhlaba yeT20 yalo nyaka kanjalo neyango-2022 ekubeni nakwiNdebe yoMhlaba kuma-ODI ka-2023, uBavuma uyena futhi ozobe eshayela umkhumbi othwele amathemba esizwe.
Ungena esikhundleni sikaQuinton de Kock ozidedele zonke izikhundla zobukaputeni (ODI, T20 nama-Test) abezingamele kuleli qembu lesizwe.
UBavuma uzoba yiphini kweyamaTest lapho isikhunddla sinikwe khona uDean Elgar.
“Ngibe nokushaqeka ngesikhathi bengibuza ukuthi ngingasamukela yini lesi sikhundla uma bengasinika mina,” usho kanje.
“Yize ngithukile kodwa akuzange kungithathe isikhathi eside ukwamukela. Angikholwa futhi ukuthi ukhona umuntu ongasiyeka isikhundla esihamba nokukhetheka nokuhlonipheka okungaka uma esinikwa.
“Nakanjani kukhona lokhu kuxukuzeka komqondo kwazise akekho owaziyo ukuthi kuzokwenzekani kusukela manje kodwa ukwazi ukuthi ngisuka kuphi nalaba badlali engizoya nabo empini kungiqinisa idolo.
“Ukuze ngibe kulesi sikhundla yibona abadlali bami abangiphakamisile ngakho-ke lokho nje kukodwa kwenza ngizizwe ngikhethekile ngoba akubona abantukazana nje (laba abangiphakamisile) kepha abantu abakhulu emphakathini wekhilikithi yomhlaba wonke,” kusho lo mdlali.
Abaningi baqale ukumqaphela uBavuma ngo-2016 ngesikhathi eba wumdlali wokuqala webala elimnyama kumaProteas ukwenza ama-runs angu-100.
Kusukela ngaleso sikhathi usemele izwe lakhe amahlandla angu-44 kwi-test. Uke alunguze nakuma-ODI neT20 kodwa umandla kwi-test.
UBavuma ubuqonda kahle ubumqoka balesi sikhundla kubantu bebala elimnyama kodwa uthi uyakukhulekela nokuthi akhunjulwe njengokaputeni omnyama owahola izwe lihlabana.
“Yinto enkulu ukuba nokaputeni webala elimnyama uma uwazi kahle umlando wezwe lethu. Ngikuqonda kahle ukuthi kungani kukhona lapho kuzojatshulelwa khona kakhulu (ukuqokwa kwami) kunakwezinye izindawo.
“Ngizimisele ukukhunjulwa hhayi njengokaputeni wokuqala omnyama kumaProteas kuphela kodwa ukaputeni owahola izwe lidla izinkomishi ezimqoka emhlabeni,” kusonga uBavuma ejobelela ngesethembiso sokuthi ngeke akhohlwe la ephuma khona.
Previous Previous post: Akasakwazi okumele akwenze ukuthola ijezi uLentjies
Next Next post: Zibhimba kakhulu kunokuba zilunge izinto kwiChiefs